market analysis(market analysis) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको पाँचौँ दिन बिहीबार सेयर बजारमा उछाल आएको छ। बजार आज ७४.९३ अंकले उकालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक २०३७.६४ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १२.६३ अंकले बढेर ३९१.७८ को विन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा बढेर साढे २ अर्ब रुपैयाँको...
मार्केट अपडेट: २००० माथि उक्लियो बजार, झन्डै रु. ६० करोडको कारोबार
काठमाण्डौ । सेयर बजार बुधबार २००० माथि उक्लिएको छ। यो समाचार तयार पार्दा (१२ः०८ बजे)सम्म बजार ३८.०५ अंकले बढेको छ। योसँगै नेप्से परिसूचक २०००.७५ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ६.९३ अंकले बढेर ३६८.०८ को विन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम झन्डै ६० करोड रुपैयाँको भएको छ। अहिलेसम्म नेप्से उपमूहमा...
बजार दोहोरो अंकले बढ्यो, सबै समूहमा हरियाली
काठमाण्डौ । सेयर बजार बुधबार भारी अंकले उकालो लागेको छ। बजार आज ४१.३९ अंकले उकालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १९६२.७१ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ६.५५ अंकले बढेर ३७९.१५ को विन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम साढे १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भएको छ। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष...
बजारमा ११.८२ अंकको गिरावट, कारोबार पनि घट्यो
काठमाण्डौ । सेयर बजार मंगलबार पनि ओरालो लागेको छ। बजार आज ११.८२ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै १९२१.३१ को विन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीका ३.२२ अंकले घटेर ३७२.६० को विन्दुमा झरेको छ। कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा घटेर १ अर्ब रुपैयाँ बढीको मात्रै भएको छ। बजार जानकार वीरेन्द्र बिष्ट आजको घटाइलाई सामान्य करेक्सनका रुपमा...
दोहोरो अंकले घट्यो बजार, सीआईटीको उच्च कारोबार
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ। आज बजार २३.८५ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १९३३.१३ को विन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७.०२ अंकले घटेर ३७५.८२ को विन्दुमा ओर्लेको छ। कारोबार रकम २ अर्ब रुपैयाँ बढीको भएको छ। बजार जानकार...
बजारको बाउन्सब्याकमा यी सेक्टरका लगानीकर्ता भए मालामाल (सूचीसहित)
काठमाण्डौ। लामो समयको गिरावटपछि आज सेयर बजारमा गतिलो बाउन्सब्याक भएको छ। आज झन्डै ९५ अंकले बजार बढेको छ। यो दिन बैंक तथा वित्तीयका सेयरधनीहरु मालामाल भएका छन्। भारी अंकको बढोत्तरी भएको बजारमा आज अधिकांश कम्पनीका सेयरमूल्य उकालो लागेका छन्। बैंकिङ सेक्टरतर्फ हेर्ने हो भने आज कारोबारमा २१ वटै वाणिज्य बैंक सेयरमूल्य बढेको छ। यो...
बजारको गतिलो बाउन्सब्याक, कारोबार पनि रु. २ अर्ब माथि
काठमाण्डौ । साताको पहिरो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजारमा उछाल आएको छ। बजार आज ९४.९२ अंकले उकालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १९५६.९८ विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि १७.९३ अंकले बढेर ३८२.८४ को विन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकम सवा २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भएको छ। पुँजीबजार दबाब समूहका...
सेबोन र लगानीकर्ताबीच सहमतिसँगै बजारमा हरियाली, नेप्सेमा दोहोरो अंकको बढोत्तरी
काठमाण्डौ । आन्दोलनरत लगानीकर्ता र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बीच १९ बुँदे माग कार्यान्वयनका विषयमा सहमति जुटेसँगै शुक्रबार सेयर बजार पनि उकालो लागेको छ। कारोबारको सुरुआती चरणमा भारी अंकले गिरावटको बजारमा लगानीकर्ताका माग कार्यान्वयन गर्न सहमति जुटेपछि दोहोरो अंकको बढोत्तरी भएको हो। बजार १३.७८ अंकले बढेको छ। योसँगै नेप्से...
बजारमा भारी गिरावट, गभर्नरको अभिव्यक्तिले लगानीकर्ता थप त्रसित
काठमाण्डौ । सेयर बजारमा बिहीबार पनि भारी अंकको गिरावट आएको छ। आज बजार ४५.२५ अंकको गिरावट आएको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १८४८.२८ को विन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७.०६ प्रतिशतले घटेर ३६२.०९ को विन्दुमा ओर्लेको छ। बजार जानकार सरोज भट्टराई निरन्तर घटिरहेको बजारमा गभर्नरको पछिल्लो अभिव्यक्तिले...
बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, ‘१९ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ’
काठमाण्डौ । सेयर बजार बुधबार दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ। बजार आज ३१.२१ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १८९३.५३ को विन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स ५.९४ अंकले घटेर ३६९.१५ को विन्दुमा ओर्लेको छ। कारोबार रकम पौने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भएको छ। बजार जानकारी प्रकाश रजौरे बजार सुधार...
दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, यस्ता छन् बजार बढ्नुका कारण
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ। आज बजार ३९.९३ अंकले उकालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १९२४.७४ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ८.९० अंकले बढेर ३७५.०९ को विन्दुमा पुगेको छ। सवा एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भएको...
नेप्सेमा भारी गिरावट, ‘लगानीकर्ताका माग तत्काल सम्बोधन हुन आवश्यक’
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि सेयर बजारमा भारी अंकको गिरावट आएको छ। बजार आज ४९.३१ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १८८४.८१ को विन्दुमा झरेको छ । राम्रा बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७.६६ अंकले घटेर ३६६.१९ को विन्दुमा ओर्लेको छ। कारोबार रकम भने पौने २ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा...
काठमाण्डौ । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार पनि सेयर बजारको ओरालो यात्रा कायमै रहेको छ। बजार आज ३७.२७ अंकले ओरालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १९३४.११ को विन्दुमा झरेको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७.२९ अंकले घटेर ३७३.८५ को विन्दुमा ओर्लेको छ। कारोबार रकम १ अर्ब रुपैयाँ बढीको भएको छ। बजार जानकार...
बजारमा झिनो गिरावट, ‘लगानीकर्ता गुड न्युजको प्रतीक्षामा’
काठमाण्डौ । धितोपत्र कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सेयर बजारामा सामान्य गिरावट आएको छ। बजार जानकार प्रेम ओली मुख्य समस्या पैसाकै रहेको बताउँछन्। ‘तरलता सहज नभएसम्म बजारले गति लिन सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नै सहज गर्नुपर्छ।’ अहिले धेरै लगानीकर्ता मौद्रिक नीतिको प्रतीक्षामा...
दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, ‘उच्च विन्दुमा बेच्नेहरु फेरि बजार पस्न थाले’
काठमाण्डौ । सेयर बजार बिहीबार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ। बजार आज १२.५७ अंकले उकालो लागेको हो। योसँगै नेप्से परिसूचक १९७८.९४ को विन्दुमा उक्लिएको छ। राम्रा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ३.१० अंकले बढेर ३८२ को विन्दुमा उक्लिएको छ। कारोबार रकम १ अर्ब रुपैयाँ बढीको भएको छ। बजार जानकार वीरेन्द्र बिष्ट आज बजार बढ्नुले...
सेञ्चुरी बैंकको ऋणपत्र नेप्सेमा सूचीकृत